Iintente kunye neendidi zazo | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Ihlaziywe 11/06/2016 18:08 | Amanzi abandayo e-aquarium
Las iintente Zizo iintlanzi ezilawula kakhulu ii-aquariums kunye namachibi kwiintlobo zazo ezahlukeneyo. Ngokuba nesikhundla esikhulu se usinde kwiimeko ezigwenxa uyincede ukuba ibe lolunye lweentlobo ezifunwayo yi-hobbyist ye-aquarium.
Okokuqala, kufanele kuqatshelwe ukuba i-carp ayinikezelwanga ukuba ikwazi ukuhlala ngokupheleleyo kwiitanki zentlanzi ezijikelezileyo, ezi ntlanzi zifuna kakhulu isithuba sokubanakho ukuphuhlisa nokuzala ngaphandle kwengxaki okanye ukusikelwa umda. Yiyo loo nto ii-aquariums ezifanelekileyo zokugcina i-carp zivela kwi-100 yeelitha.
Zixhathisa kakhulu kwaye ziyomelele iintlanzi. Inkqubo ye- ikhaphethi unezikali ezinkulu ezikhazimlayo. Kwiindawo ezincinci zasemakhaya ezinabantu abaninzi ezinokubonisa iingxaki zobundlongondlongo kwiintlobo ezibuthathaka. Nangona eyona nto iqhelekileyo kukuba ziintlanzi ezinoxolo kwaye zihlala ngokuvisisana nezinye iintlanzi.
Ziyakwazi ukumelana nengqele ngaphezu kobushushu, kuba oku kuthwala ukungabikho kweoksijini. Ebusika ukuba zondliwe kakuhle ziyatyhafa kwaye kumadama anobunzulu obaneleyo ade amelane neqabaka. Kuyinyani ukuba bahambelana nalo naliphi na iqondo lobushushu elingalunganga.
I-Carp ikakhulu itya imisundululu, iintshulube, ii-crustaceans kunye nezinambuzane. Bakwamkela ngokugqibeleleyo ukutya kweflake xa kufikwa kwiindidi ezincinci ezincinci. Ukubanika ukutya okugqibeleleyo, kulula ukudibanisa izikali kunye nokutya okuphilayo okanye okubandayo; Artemia, Daphnias kunye nemibungu yengcongconi.
Carp yeyosapho lwaseCyprinidae. Kwaye phakathi kwezona ntlobo zaziwayo yiCarasius Auratus, iCyprinus carpio kunye neCyprinus carassius. Inkqubo ye- Ikhayithi yaseMelika lolona hlobo luxhaphakileyo. Inomthamo omkhulu wokuziqhelanisa kunye nokumelana nolondolozo lwayo kwiimeko ezimbi kakhulu.
El Umsila we Veil o RyukinIgama leempiko zayo ezinde, linomzimba oqinileyo kwaye mfutshane kune-comet. I-Oranda ibonisa ukufana okukhulu kwiCola de Velo, ngaphandle kwepepillae yecephalic. Inkqubo ye- Iliso lebhola okanye i-Titeleskopu Yeyona ntlobo inamehlo aqumbileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Iintente kunye neendidi zazo
Ndingathanda ukufunda okungakumbi malunga nokutya kwabo kokondla kunye nenxalenye yokuzala kwakhona kumadama